Ọgwụ mgbochi patosis - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Ọgwụ mgbochi patosis
Ọgwụ mgbochi patosis n'egbochi ụkwara mkpogho. Ọdị ụdị abụọ: nke emere site na ọtụtụ nchọputa na nke bụ naanị ya. Nke emere mgbe emesịrị ọtụtụ nchọpụta n'arụ ọrụ ruo ihe ruru pasent 78 ebe nkeozọ dị naanị pasent 71 ruo 85. Mana ka afọ n'aga, k'osi arụ n'ebelata site na pasent 2 ruo 10 kwa afọ, ma karịsịa na nke a di naanị ya. ḷgba ya nwaanyi dị ime n'echekwa nwatakịri ahụ. Ọgwụ a azọọla ndụ ruru ọkara nde mmadụ kemgbe 2002.
Mba ụwa n'ahụ maka ahụike bụ Wọld Helt Ọganaịzeshọn na ngalaba n'ahụ maka mgbochi oria bụ Center for Disease Control and Prevention n'enye ikike ka nwatakirị ọbụla gbaa ọgwụ patọsis site na oge ruo n'oge. Nke a gunyere ndị nwere nje obirinajaocha. Ekwesirị ịgba ya site n'izu uka isi nke nwa ahụ. Nye ndị karirị afo ndụ ahụ ekwesirị inye ha karia. Ejikwa ọgwụ ndịọzọ eme ihe maọbụrụ n'achorọ ka ọrụọ ọrụ ka okwesirị.
Mba ndị mepere emepe n'ejikarị nke bụ naanị ya eme ihe n'ihi ka osi arụ orụ.Pasent 10 ruo 50 nke ndị enyere ya n'egosi ebe n'acha ọbara ọbara ebe agbara ha bụ ogwụ na oyiọmụma. Oyiọmụma ndọtụ n'ibeakwa ewepụghị aka n'esochi, mana nkea bụ maka pasent erughị otu. Mgbe agbara ụdị nke a, onweghI ebe n'agbali elu.
Mana nye ụdị nkea abụọ a, ha nwere ihe ndị n'esochi mgbe ọbụla mmadụ gbara ya ma karịsia mgbe agbara ya ụmụntakịrị. Ụdị nke mbụ a ekwesịghị ka agbaa ya ụmụntakịrị mgbe ha gaferela afọ isii. Ụdị abụọ a anaghị emetụkwa n'ụbụrụ. Ọgwụ mgbochi patosis pụtara n'afọ 1926. Ótú mba ụwa akpọrọ Wọld Helt Ọganaịzeshọn ji ya mee ihe dịka ọgwụ ha ga-eji eme ihe nke kasị mkpa maka nlekọta ahụike. Ndị ya na nke a n´n'ogo gụnyere tetanus, nje imi, ọrịa polio, ọrịa ngụgu n'ada ọnụ egọ dị 15.41 dọla maka otu n'afọ 2014.
Wefụtàrà ya shí https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Ọgwụ_mgbochi_patosis&oldid=64922